ကမ္ဘာကြီး ပိုမိုပူနွေးလာ၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်သည် ကမ္ဘာ့စတုတ္ထ အပူချိန် အမြင့်မားဆုံးဖြစ် - Yangon Media Group
ကမ္ဘာကြီး ပိုမိုပူနွေးလာ၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်သည် ကမ္ဘာ့စတုတ္ထ အပူချိန် အမြင့်မားဆုံးဖြစ်
ဝါရှင်တန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၅
ကမ္ဘာမြေကြီးသည် လွန်ခဲ့ သောနှစ်နှစ်ကထက် ပိုမိုအေးမြလာသည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း ယင်းသည်ပင် စတုတ္ထအပူဆုံးနှစ် အဖြစ် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ဂျပန်မိုးလေဝသပညာရှင်ဇေကီ ဟော့စ်ဖါသာက ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
၁၉၅၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်အထိ ပျမ်းမျှအပူချိန်သည် ၁ ဒသမ ၃၉ ဒီဂရီ (ဝ ဒသမ ၇၇ ဆဲလ်စီးယပ်စ်)ဖြစ်ပြီး ယင်းသည် စက်မှုတော်လှန်ရေးအကြိုကာလထက် ၂ ဒသမ ဝ၉ ဒီဂရီ (၁ ဒသမ ၁၆ ဆဲလ်စီးယပ်စ်) ပိုမို ပူပြင်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွက် ချက်ရရှိခဲ့သည်ဟု ၎င်းကဆက် လက်ပြောဆို လိုက်သည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကလည်း ယင်းအပူချိန်သည် ကမ္ဘာကြီး၏စတုတ္ထ အပူဆုံးကာလများအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ်နှင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်များသည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ကထက် ပိုမို ပူပြင်းခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းများ အရသိရှိရသည်ဟု မစ္စတာဇေကီ ဟော့စ်ဖါသာက ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုလိုက်သည်။
ယင်းကြောင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နှင့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်များ တွင် အယ်လ်နီညိုနှင့် လာနီညာ သမုဒ္ဒရာရေ အပူချိန်ပြောင်းလဲ မှုဖြစ်စဉ်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်သည်။ ယမန်နှစ်ကလည်း ဗဟိုဥရောပအပါအဝင် နိုင်ငံ ပေါင်း ၂၉ နိုင်ငံ၌ အန္တာတိတ သမုဒ္ဒရာရေသည် စံချိန်တင်ပိုမိုပူ နွေးလာရသည်ဟု ဆက်လက်ပြော ကြားလိုက်သည်။
ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ဦး မတော်တဆ သေဆုံးပြီးနောက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကို စင်ကာပူ လျှော့ချမည?
တရားမဝင် စက်သုံးဆီဆိုင် မီးလောင်မှုကြောင့် မီးဘေးသင့်ခဲ့သူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆီဆိုင်ပ
မြန်မာ-ထိုင်း မယ်ဆိုင်ချောင်း ရေသုံးစွဲရေး သဘောတူညီချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ယာယီ ဝါးရေတာ??
နာဂဒေသ ကျေးရွာ ၁ဝ ရွာအတွက် ဝပ် ၆ဝ ဆိုလာများ တပ်ဆင်ပေးမည်
”ကလေးကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ဖို့ တော်တော်လေး အချိန်ယူရဦးမယ်” သရုပ်ဆောင် နန်းမြတ??